ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်သူလူထုများမှ ၄င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေနှင့်ပတ်သက်၍ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်ထားလာမှုများ အပေါ် မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျင့်သုံးမည့်လုပ်ငန်းမှာ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြေတိုင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသည့် မြေများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄။ တာဝန်နှင့် တာဝန်ခံများ(Responsibilities)
အခန်း (၁)။ အမည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်
အခန်း (၂)။ မြို့ပြစီမံကိန်းဆိုင်ရာမြေများစီမံခန့်ခွဲခြင်
အခန်း (၃)။ မြေငှားစာချုပ်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
အခန်း (၄)။ မြေငှားဂရန်စာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း
အခန်း (၅)။ မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း
အခန်း (၆)။ မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံသည့်မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်ရေးကူးခြင်း
အခန်း (၇)။ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း
အခန်း (၈)။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ ၃(က)အရ လယ်ယာမြေဟူသောစကားရပ်တွင်အကျုံးမဝင်ကြောင်းဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း
အခန်း (၉)။ မြေတိုင်းတာခြင်း
အခန်း (၁၀)။ အတည်ပြုတိုင်းခွဲ/ပေါင်းခွဲ(မြေကွက်ခွဲစိတ်ခြင်း)
အခန်း (၁၁)။ မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်ခွဲ)လျှောက်ထားခြင်း
အခန်း (၁၂)။ အခွန်လွတ်သာသနာ့မြေနှင့်အခွန်လွတ်သာသနာမြေထုတ်ပေးခြင်း
အခန်း (၁၃)။ အခွန်လွတ်ဗဒ္ဓသိမ်မြေနှင့်အခွန်လွတ်ဗဒ္ဓသိမ်မြေဂရန်ထုတ်ပေးခြင်း
အခန်း (၁၄)။ ကန့်ကွက်လွှာတင်ပြခြင်းအပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
အခန်း (၁၅)။ အယူခံဝင်ခြင်း
အခန်း (၁၆)။ ကော်မတီပိုင်မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်
အခန်း (၁၇)။ အထွေထွေ
၅။ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများအား အဆင့်လိုက်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တာဝန်ခွဲဝေမှု
၆။ ​ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်ထားခြင်းများအား ကောက်ခံသည့်ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများ
သတ်မှတ်ထားသောပုံစံများ(Forms and Templates)
1. မြေငှားစာချုပ်တိုးမြှင့်ပေးရန်နှင့် မြေငှားစာချုပ် ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ
2. လယ်ယာမြေ ဥပဒေပုဒ်မ ၃(က) ဝန်ခံချက်လက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း
4. မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံသည့် မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကူးပေးပါရန်လျှောက်ထားခြင်း
5. မြေ၏ နယ်နိမိတ်လေးရပ်ကို တိုင်းတာပေးပါရန်လျှောက်ထားခြင်း
၇။ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်များ (References)
မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ။ (၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈) နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၀၁) ဖြင့်ထုတ်ပြန်သော မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများအရ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
၈။ မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း(Change History)
မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနအနေဖြင့် ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုး ရေးဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက်ပိုင်း ၄င်းဌာနမှ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ပုံ နည်းလမ်းများ၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းမရှိသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီမှုမရှိတော့ခြင်း၊ အခြေအနေအရပ်ရပ်အရ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ဆင့်ဆောင်ရွက် ရခြင်းတို့ကြောင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျရှိစေရေးအတွက် မြေစီမံ ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအား အသစ်ထပ်မံရေးဆွဲပြီး ၂၃-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကော်မတီဝင်များအစည်းအဝေး(၃/၂၀၁၇)၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ် ၆။ (က/၄၂) နှင့် ၂၀-၆-၂၀၁၇ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ကော်မတီဝင်များ အစည်းအဝေး (၁၆/၂၀၁၇)၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ် ၆။ (က/၄၂) အရ ယာယီအတည်ပြုထားသည့် မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုများကို ၁၃-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။